I-CNC Machining Factory Ukuthenga Inani Lonke | I-PTJ Hardware, Inc.
Ikhaya > Mayelana NATHI > Ukuthengwa Kwenani Lonke
▶ Inani elihlukile nesiphakamiso
Ukujabulisa amakhasimende ethu nokuthola ukwethenjwa kwawo ngokunikeza
ukuhlela okuguquguqukayo nokuphendula okusheshayo kwezidingo zabo eziguqukayo njalo.
Sinikeza ukonga ngezinhlelo zethu zokugcinwa kwezimpahla ezithunyelwa nabathengisi.
Sinciphisa isikhathi nomzamo futhi sigwema isimanga ngokuxhumana sisuka kurisidi ngokulethwa kwe-oda.
Senza lula ulwazi lwabo lokuthenga ngokunikela ngezinqubo eziningi ezisendlini nokuphatha izinsizakalo zangaphandle. Le ndlela yokuma esitolo esisodwa iqeda isikhathi sokuhola futhi yanelise izidingo zamakhasimende ethu eziyinselele.
▶ Ukuqinisekisa ikhwalithi
Sisebenzisa okwenziwe ngezifiso ngoba yisoftware esetshenziswa kakhulu futhi ethembekile eyenzelwe ngqo abakhiqizi abangokwezifiso, izitolo zemisebenzi, nezitolo zobuchwepheshe obuphezulu.
Yonke imininingwane yokulandela ngomsebenzi ingene ohlelweni lwethu ekuqaleni kwe-oda ngalinye lamakhasimende. Yonke inqubo iyalandelwa ngokulethwa ukuqinisekisa ukuthi izinsuku zokuzibophezela ziyahlangatshezwa.
▶ Ukukhiqizwa kwekhwalithi nokuncika
Imboni ye-PTJ ayiphathi isitifiketi se-ISO 9001: 2015 kuphela, kepha futhi isebenza ngokuhambisana nezindinganiso zikaHulumeni ze-MIL-I-45208A neMil. Ukucaciswa komdwebo we-CARC nokushisela.
Lezi zitifiketi nokubhaliswa kuqinisekisa ukuzinikela esikubeka ekhwalithi yemikhiqizo yethu.
Ngokuhlangana nozakwethu abambalwa abakhiqizayo, sisebenzisa futhi imigomo nemikhuba yokukhiqiza kwe-LEAN.
Lokhu kusho ukuthi silwela ukuqeda imfucuza, sithuthukise ukusebenza kahle, futhi sizibophezele ohlelweni lokuthuthuka okuqhubekayo.
Izingxenye Zomshini Zenzelwe wena ...
▶ Ukuqashelwa kwamakhasimende
Ngenxa yalezi zimiso, Imboni ye-PTJ ibonwe ngamakhasimende njengomhlinzeki ovelele wezingxenye zekhwalithi ezenziwe ngomshini.